'Crazy Samurai' nwere nke mbụ 77-Min. Otu-Mee Action Film usoro
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'Crazy Samurai' nwere nke mbụ 77-Min. Otu-Mee Action Film usoro
edere ya Timothy Rawles January 11, 2021
Japanese iconic art icon Tak Sakaguchi (vesos, Bilie igwe nwanyi) na-enweta ụgwọ kachasị elu na fim ahụ Crazy Samurai: 400 na nke 1. Ihe ụgbọala na-adọkpụ dị n'okpuru. Ihe nkiri a ga-amalite na izizi martial Arts HI-YAH! na February 12, 2021, tupu Digital ya, Blu-ray, na DVD dobe na Machị 2 site na Ọma Gaa USA Ntụrụndụ.
Dị ka akwụkwọ akụkọ mgbasa ozi si kwuo:
“Ihe pụtara ìhè na fim a pụrụ iche bụ usoro ihe omume nke 77 na-eme n'otu oge na-aga n'ihu, 'ọgụ marathon [nke] na-ama aka ọ bụla e mere na fim' (Forbes). Director Yuji Shimomura (Ọnwụ anwụ, Re: Amuru) arụpụtawo ihe dị egwu site na arụ ọrụ choreography gburugburu Sakaguchi, bụ onye na-egwu mma agha kachasị mma na Japan - Miyamoto Musashi (1584-1645), onye agha na-enweghị mmeri na opekata mpe 60 ederede duels-ka ọ na-aga agha ya kacha sie ike. ”
Ọma Gaa USA Ntụrụndụ
Nke a bụ synopsis maka Crazy Samurai: 400 na nke 1:
Mgbe nna ukwu samurai bịarutere iji duo Yoshioka dojo ihere, ọ na-abanye na nbì. N'ime ihe ịtụnanya, otu usoro ihe nkiri, Miyamoto Musashi (Tak Sakaguchi) na-alụ ọgụ maka ndụ ya megide ndị dike 400, na-enweta ebe na akụkọ ntolite Crazy Samurai Musashi.
CRAZY SAMURAI: 400 na nke 1 nwere Oge ojiri gaa ihe dika nkeji 92 ma o nweghi akara.
'Clarice' Ka Na-alụ ọgụ n'Oge Gara Aga Na Official Trailer Site Series
Dana DeLorenzo na Ray Santiago Voice Ha Characters na 'Ọjọọ Nwụrụ Anwụ: Egwuregwu'